ဘယ်လိုဘယ်လောက်ဝင်ငွေ YUTUBERY: နည်းလမ်းများနှင့်ချန်နယ်များ၏သုံးသပ်ချက် - သတင်း - 2019
ကလူ YouTube ပေါ်မှာလိုင်းများမှမွေးဖွားပေးကြောင်းအဆိုပါအကြောင်းပြချက်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဝင်ငွေဖြစ်စေသောပုဂ္ဂိုလ်ရေး "အင်တာနက်ပေါ်ရှိ TV က" ကိုဖန်တီးရန် - တစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးရည်မှန်းချက်ကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်တစ်ချိန်ကတစ်စုံတစ်ယောက်က, တစ်စုံတစ်ဦးကထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်, သူ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးသည်။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့သစ်ကိုအသုံးပြုသူအရေအတွက်နှင့် roller ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်ထားရှိနေ့တိုင်းကြီးထွားလာကြောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။
YouTube ကို-Channel ကိုများအတွက်အလားအလာအကောင်းဆုံးနယ်ပယ်ကဘာတွေလဲ
ဗီဒီယိုကို channel များကိုခရီးသွား
နည်းပညာ updates များကိုဗီဒီယိုလိုင်းများ
က "ပြာ" တွင်အခြားသူများအား '' ဗီဒီယိုများသတ်မှတ်ထား
ထိပ်တန်း yutubery ဘယ်နှစ်ယောက်ဝင်ငွေ
1. EeOneGuy (Ivangay)
2. အာဒံကို ThomasMoran
3. GET, Movies
4. "Masha နှင့်ထမ်းရွက်"
လူ့ဘဝယခုအချိန်တွင်ကွန်ရက်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည် yutuberov မှဗီဒီယိုအားလုံးကိုကြည့်ရှုရန်လုံလောက်သည်မဟုတ်။ အချို့သောခန့်မှန်းချက်ကအစားအသောက်နှင့်အိပ်စက်ခြင်းများအတွက်အားလပ်ချိန်မပါဘဲအတိအကျ 1000 နှစ်ကယူပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါအရေအတွက်နာရီ, မိနစ်, ပင်စက္ကန့်အားဖြင့်တိုးပွားလာနေသည်။
လူအစုအဝေးထဲကနေထွက်ရပ်တည်ရန်ကဘယ်လို, ကြီးစွာသောပုံပြင်များ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်နှင့် "samseberezhissorov" ၌ပျော်ကြဘူး - နာမည်ကျော်ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်စာရေးသူအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောရုပ်သံလိုင်းမှဖြေဆိုရန်ရှိသည်သောအဓိကပြဿနာများကို။ ထိုအခါအလားအလာနယ်ပယ်ကိုရှာဖွေကြိုးစားပါ။ သို့မဟုတ် - ယနေ့အထိအရှိဆုံးအလားအလာသူမ၏ရှေးခယျြဖို့။ ထိုသူတို့တွင် ...
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ခရီးစဉ်နှင့် Adventures အကြောင်းကိုပုံပြင်များကိုအမြဲသက်ဆိုင်ရာများမှာ
ခရီးစဉ်အပေါ်အစီရင်ခံစာများ, ခဲ့ကြသည်ဖြစ်ကြပြီးအမြဲသက်ဆိုင်ရာဖြစ်လိမ့်မည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်တင်ပြတဲ့အခါမှာသူတို့တစ်တွေလျောက်ပတ်သောပရိသတျမှေးနိုငျသညျ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, လူတိုင်းမအရှေ့တောင်အာရှတွင်မှတဆင့်တစ်ဦးရိုင်းခရီးအပေါ်ဥပမာ, ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်လိမ့်မည်။ သို့သော်များစွာသောသီရိလင်္ကာ, အိန္ဒိယ, ခါးပိုက်နှိုက်, ကမ္ဘောဒီးယားနှင့်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံညဥ့်အသက်တာ၏ထူးခြားဆန်းပြားအစားအစာအတွက်ဆန်းကြယ်မှုများသောနေရာများအကြောင်းကိုပြောပြသောဗီဒီယိုတစ်ခုဆက်လက်စိတ်ဝင်စားအတူစောင့်ကြည့်လိမ့်မည်။ မဟုတ်ဟာသတစ်ခုအသိမပါဘဲ - စိတ်ဝင်စားဖို့ဇာတ်ကြောင်းပြောသူကပြောပါတယ်ရသောအကြောင်းကိုတစ်စိတ်အားထက်သန်တိုင်းပြည်ကြီးနှင့်အထူးသဖြင့်အဖိုးတန်ကြောင်းကိုအဓိကအရာ။
Cine စိတ်ဝင်စားဖို့ technique ကိုများနှင့်ကြော်ငြာရှင်များ, စားသုံးသူများနှင့်
အားလုံးထိုကဲ့သို့သော channel များကိုပထမဦးဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့လူဖြစ်ကြ၏။ တိုတောင်းသောဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုမည်သို့တစ်ဦးသို့မဟုတ်အခြားကိရိယာ၏ပုံပြင်ကိုပြောပြပါ။ unvarnished နှင့်ကြော်ငြာတောက်ပြောင် - ဤကိစ္စတွင်အတွက်အံ့ဖွယ်နည်းပညာအပေါငျးတို့သအကောင်းအဆိုး cons အများဆုံးပွင့်လင်းပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။ ဤဗီဒီယိုအားရုပ်သံလိုင်းသင်ဤအထူး gadget ကဝယ်ဖို့ဖြစ်စေမနားလည်ကူညီပေးသည်သို့မဟုတ်ပါကအခြားမည်သည့်အာရုံစိုက်ဖို့ သာ. ကောင်း၏။ မကြာခဏဆိုသလို, အ technique ကိုအပေါ် YouTube ချန်နယ်၏လူကြိုက်များသည့်ထုတ်လုပ်သူများကသူတို့ထုတ်ကုန်အသစ်တွေကြော်ငြာပိုစတာဝယ်နိုင်အောင်မြင့်မားတဲ့ဖြစ်လာသည်။ ကြည့်ရှုသူကိုပင် "ညစ်ပတ်လှည့်ကွက်" မခံစားရပါဘူးဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ဒါသေသပ်စွာနဲ့မသိမသာထိုသို့ပြုမှခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ ရလဒ်အနေနဲ့အားလုံးကျေနပ်မှုရှိပါတယ်:
အောင်မြင်သောအလှတရား-yutuberov ရိုးရှင်းတဲ့လျှို့ဝှက်ချက် - ကမျက်နှာပြင်နှင့်အတူယုံကြည်မှု, "နှစ်ခုမိန်းကလေးရဲ့စကားပြောဆိုမှု," သူတို့ထဲကတဦးတည်းဖြစ်၏မော်နီတာများ၏ရှေ့မှောက်၌ထိုင်လျက်, လူငယ်နှင့်အလှအပ, ဒုတိယစောင့်ရှောက်ဖို့ဘယ်လိုပြောထားပါသည်, ကဂရုတစိုက်နားထောင်တယ်။
ယင်းချန်နယ်တွင်အသုံးဝင်သော roller နှင့်အတူစုဝေးလျက်ရှိသည်နှင့်အချိန်ကျော်က၎င်း၏ဆီလျော်မှုမဆုံးရှုံးဘူး, ဘယ်လိုအပေါ်သတင်းအချက်အလက်များ:
ပြီးတော့ - တစ်ဦးမွေးကင်းစကလေးငယ်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန် - များတို့သည်ဤလောကသို့ကလေးတစ်ဦး၏အသွင်အပြင်ပြီးနောက်: အသူ့ကို swaddle ခွင့်နှင့်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် feed ကို။ YouTube ဗီဒီယိုတွေအတွက်အကြံပြုချက်များမိခင်နှင့်ကလေးများအတွက်လိုင်းများ, ဖြစ်ကောင်းအစဉ်အဆက်ကိုအဆုံးသတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုအခါသူတို့ကိုအများအပြားကြော်ငြာရှင်များစိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မည်။ အသစ်ကကလေးအစားအစာတန်းနမူနာရုံနှီး၏ဖွဲ့စည်းခဲ့လိုင်းအဖြစ်မွေးကင်းစကလေးများအတွက်ပျော်စရာကစားစရာ "တရားခွင်ပေါ်" ဟုအဆိုပါလူငယ်တစ်မိခင်-yutubershe ကမ်းလှမ်းရန်ပျော်ရွှင်ဖြစ်ကြသည်။
ဗီဒီယိုပေါ်တွင်ဖမ်းမိအသုံးဝင်သောညွှန်ကြားချက်, အစီအစဉ်များနှင့်ကိရိယာများ, သုံးသပ်ချက်များ, ၎င်း၏ပရိသတ်ကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်
တဦးတည်းသို့မဟုတ်အခြားကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်လည်ပတ်ပုံပေါ်အသေးစိတ်နှင့်အမြင်အာရုံညွှန်ကြားချက် - အလုပ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြားမှ၎င်း၏တပ်ဆင်ခ၏ပရိယာယ်နှင့်အတူစတင်။ ထိုကဲ့သို့သော roller ၏ဖန်ဆင်းခြင်း - မတူပဲ, ဥပမာ, ခရီးသွား၏ပုံပြင်များ, မည်သည့်ရိုးရှင်းသောအော်ပရေတာမလိုအပ်ပါဘူး။ အဆိုပါဇာတ်ကြောင်းနှင့်မွမ်းမံလေ၏မော်နီတာမျက်နှာပြင်ကနေယူကောင်းသောအလုံလောက်အောင်ဗီဒီယို, ။ စျေးပေါနှင့်စေတနာစိတ်နှင့်။ Internet မှကျွမ်းကျင်သူများ၏အကူအညီဖြင့် - ကို install အစီအစဉ်များနှင့်အတူပြဿနာများအများအပြားရှိပါတယ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, လူတိုင်းနီးပါးဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေသည်ကို ထောက်. ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ပုံမှန်ရှုထောကဗီဒီယိုကိုရေးသားသူ, အာမခံပါလိမ့်မည်။
အောင်မြင်သောဘလော့ဂါများသင်၏ချန်နယ်တွင်ငွေရှာဖို့နည်းလမ်းများစွာအသုံးပြုပါ။ ဤသူကားအ - က hidden အပါအဝင်ကြော်ငြာ၏ကွဲပြားခြားနားသောရွေးချယ်မှုများ, ပေါင်းစပ်။ ဒါကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်ထေနှင့် 50 တထောင်မှ 70 ရူဘယ်တစ်လ၏အမြတ်အစွန်းရဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခြေအနေကအကောင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်း, နှင့်ထိတ်လန့်မြင့်မားတဲ့ကိန်းဂဏန်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်အဘယျအသငျသညျစာရေးဆရာတစ်ယူကျု့ချန်နယ်ဝင်ငွေနိုင်မလဲ?
(ဥပမာ, Google AdSense အထံမှ) "Affiliate Program ကို" အားလုံးနီးပါး yutubery ကိုအသုံးပြုပါ။ ဤကိစ္စတွင်အတွက် Advertising ကြော်ငြာသူ့ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌သို့မဟုတ်သူ့ကိုအနားမှာဗီဒီယိုထဲတွင်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ထိုကဲ့သို့သောကြော်ငြာအပေါ်ကုန်သွယ် 1000 အမြင်များနှုန်း 70 320 မှရူဘယ်ထဲကနေဖြစ်ပါတယ်။ Channel ကိုရေးသားသူအတွက် Affiliate Program ကိုဖြတ်တောက်၏ 20-30 ရာခိုင်နှုန်းအနုတ်ဒီငွေပမာဏကိုလက်ခံရရှိပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ် 1000 လည်ပတ်ပြီးနောက်၎င်း၏ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် ပတ်သက်. 260 ရူဘယ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်ခန့် 5000 - - နေ့ကို Affiliate Program ကိုတစ်လလျှင် 170 ရူဘယ်၏ရေးသားသူဖို့ပိုဒါမှမဟုတ်ဒီထက်အောင်မြင်သောရုပ်သံလိုင်းဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင် 60000 ရူဘယ်ရန်။
ဒါဟာပိုပြီးအမြတ်အစွန်း option ကိုင်ငွေဖြစ်ပါတယ်။ ရေးသားသူတစ်ခုတည်း YouTube ကို-ချန်နယ်၏ပရိသတ်ကိုစိတ်ဝင်စားနေသောကြော်ငြာရှင်များနှင့်တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအမှု၌သတ်မှတ်ထားသောငွေပမာဏ။ Yutuber ပိုပြီးလူကြိုက်များ, ပိုစျေးကြီးသည်သူ၏န်ဆောင်မှု။ ထိပ်ဘလော့ဂါများတဦးတည်းကြိတ်စက်မှာတစ်ဦးသန်းအမြင်များစုဆောင်း, 300 ခန့်တထောင်ရူဘယ်ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ တစ်လလျှင်တဦးတည်း၏နေရာချထားအတူ - မကြာခဏကြော်ငြာရှင်များချက်ချင်းဗီဒီယိုဆက်တိုက်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ display ကိုအကြောင်းကိုခြောက်လသွားရာတစ်တီဗီစီးရီးသို့လှည့်။ မြှင့်တင်ရေး၏ဤပုံစံပေါ်တွင်ဒါအောင်မြင်သော yutubera င်ငွေအလွန်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် 300,000 အထိ - တစ်လခန့် 1.8 သန်းရူဘယ် (ကိုးကားခြောက်လဒီဇိုင်းစီမံကိန်း, ယူ) - တစ်နှစ်လျှင်။
subscriber များအားတစ်ဦးအစိုင်အခဲအရေအတွက်ကိုရှိခြင်းသူတို့ချန်နယ်ကိုမရရှိနိုင် yutuberam မှငွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ထိုကဲ့သို့သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ရုပ်သံလိုင်းအိမ်ရှင်သနားတစ်စုံတစ်ဦးကအခြားသူ၏ဗီဒီယို post ရန်သဘောတူ - သင်တန်း၏, တစ်ဦးအခကြေးငွေဘို့။
ဒါ့အပြင်လူကြိုက်များယူကျု့ချန်နယ်ဖန်တီးသူတဦးတည်းမြှင့်တင်ရေးကိုအသုံးပြုရန်အခြား option ကိုကမ်းလှမ်း - သူတို့၏ "စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလင့်များ" ၏အပိုင်းတစ်ခု၏ယာယီထို့အပြင်အဆိုပါအစပြုသူဘလော့ဂါအမှာစကားပြောကြား။ တစ်နေ့လျှင် (များသောအားဖြင့်တစ်ဦး link ကိုတစ်ဦးတည်းသာနေ့ကဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်) ဒီအပေါ်ဝင်ငွေရရှိမှု 7000, တစ်နှစ် 50 000 မှ 40 000 ကနေဆောင်ကြဉ်းဒီလမ်းအတွက်မြှင့်တင်ချင်သူတစ်ဦးတစ်လဖြစ်လိမ့်မည် - 300 000 ရူဘယ်အထိ။
yutubera 500 ရူဘယ်ကုန်ကျသည်, မိမိအငယ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏စာမျက်နှာပေါ်တွင် left တွေ့မြင်ဖို့ "အကြိုက်များ" ။ အဆိုပါ untwisted စာရေးဆရာများ၏နှစ်စဉ်ပွဲနေ့၌တစ်ဒါဇင်အထိဖြန့်ဝေနိုင်ပါတယ်အရှင်ပိုက်ဆံအိတ်တစ်နေ့လျှင်အခြား5000 ရူဘယ် replenishing, အရင်ကဆိုရင်အတွက် "likes" ။ ပိုက်ဆံဝင်ငွေ၏ဤလမ်း၏မည်သည့်လတွင်, သငျသညျ 60 000-80 000 ၏ဘဏ္ဍာတိုက်ပြည့်နှင့်တစ်ဦးနှစျတှငျနိုငျသညျ - 400 ခန့် 000-500 000 ။
channel များကိုရာထူးတိုးအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောစာရေးဆရာများများအတွက် "ပြာ" တွင်တစ်နေ့လျှင် 5000 ရူဘယ်အထိဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်
ကုန်ပစ္စည်းနေရာချထား - အလွန်လူကြိုက်များဝန်ဆောင်မှု။ စက္ကန့်အနည်းငယ်များအတွက်ဘောင်အတွင်းပျံသန်းလိမ့်မယ် - လူကြိုက်များတဲ့ yutuberam ကောင်းစွာ (ကော်ဖီထုတ်လုပ်တဲ့ဥပမာအားဖြင့်လူကြိုက်များတဲ့အမှတ်တံဆိပ်၏လိုဂိုနှင့်အတူခွက်) မှာမှတ်မိလိုဂိုနှင့်အတူအချို့သောအရာဆိုတဲ့အချက်ကိုအဘို့ကိုသာပေးဆောင်။ သို့မဟုတျ, ထိုချန်နယ်များအတွက်စာရေးဆရာသူ့ကိုယ်သူနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီ၏အမည်နှင့်အတူတစ်ဦးသည် T-ရှပ်အင်္ကျီအတွက် screen ပေါ်မှာပုံပေါ်ပါတယ်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောတိုး၏ပမာဏတင်းကြပ်စွာခွဲခြားထားပါသည်။
အတော်များများကအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောဘလော့ဂါများပြီးသားသူအကြီးတန်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ဥပမာများစံချိန်တင်ငွေပမာဏကိုလုပ်ဖို့အချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ကြသည်။ ရုရှားထိပ်တန်း 10 - သာမန်ထက်စာရေးဆရာများနှင့်မမျှော်လင့်ဘဲ themes များနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသော YouTube ချန်နယ်, အများပြည်သူရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတစ်ခုတိုးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
အိုင်ဗင် Rudskoi ချန်နယ် (Ivangay) 13 သန်းအသုံးပြုသူများကိုလက်မှတ်ရေးထိုး
ဒီကျော်ကြား yutubera ၏အခြားအမည် - အိုင်ဗင် Rudskoy ။ သူကစာရေးဆရာရဲ့မှတ်ချက်များနှင့်အတူကွန်ပျူတာဂိမ်း၏ကျမ်းပိုဒ်များ၏ရှုပ်ထွေးပွေလီလှအကြောင်းကိုပြောထားသည်သော letspley အမျိုးအစားမှာဗီဒီယိုယူပြီး, 19 များ၏အသက်အရွယ်အတွက်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ Ivangay လူကြိုက်အများဆုံးတိုင်းပြည် yutuberov ယနေ့တွေထဲကဆင်ခြင်၏။ သူက - 13 သန်းစာရင်းသွင်းသူများနှင့်အကြောင်းကို 42 သန်း 507 တထောင်ရူဘယ်နှုတ်ဆောင်ယူခဲ့ပြီးသောယင်း၏ဗီဒီယိုများ,3ဘီလီယံအထိအမြင်များ ...
အလုပျသ Golopolosov အဆိုပါ effervescent ရယ်စရာရုပ်ရှင်မှမှတ်ချက်များများအတွက်ပရိသတ်ကို၏ကိုယ်ချင်းစာအနိုင်ရ
စာရေးသူအလုပျသ Golopolosov ရုပ်သံလိုင်းအစီအစဉ်တွင်မှတ်ချက်ကိုက်ရာမှရယ်စရာကိုဗီဒီယိုပါရှိသည်ရာ, 100 500 ဖြစ်ပါတယ်။ channel ကို၏ပရိသတ်ကိုထားပြီး roller အပေါ်9သန်းကြည့်ရှုခြင်း, ဝင်ငွေရရှိမှုထိပ်ဆုံးထားပြီး - 36 သန်း 453 တထောင်ရူဘယ်၏အမှတ်အသား ...
ကာတွန်းအကြောင်းကို7သန်းပေါင်းများစွာ subscriber များအားစုဆောင်းကလေးတွေနဲ့အတူ channel
ကလေးများကာတွန်းနှင့်မိသားစုအနုပညာဓါတ်ပုံတွေကိုအတူ channel ။ subscriber များအားအရေအတွက် 65 သန်းချဉ်းကပ်၏, ရရှိခဲ့ပြီးပမာဏ 223 သန်းထက်ကျော်လွန်။ ရူဘယ်။
channel ကိုအကြောင်းကို 204 သန်းရူဘယ်ရရှိခဲ့သည့်အတွက်တစ်ဦးကပေါ်ပြူလာကာတွန်း
အနည်းငယ်မိန်းကလေးနှင့်သူမ၏အကျွမ်းတဝင်ဝက်ဝံအကြောင်းကိုအပေါငျးတို့သလေးတွေအကြိုက်ဆုံးကာတွန်းစီးရီးငွေကောက်ခံ။ အဆိုပါရုပ်သံလိုင်း subscriber များအား - အကြောင်းကို 16.5 လူဦးရေသန်း။ 204 သန်းရူဘယ် - ရရှိခဲ့သည်ဖန်တီးသူ၏ပမာဏ။
8 နှစ်များအတွက်ရုပ်သံလိုင်းထက်ပို 27 သန်းရူဘယ်ရရှိထားပြီးပါပြီ
ရယ်စရာကြော်ငြာ၏နောက်ထပ်စုဆောင်းမှု။ ဤအချိန်တွင် - yutubera Stas Davydov ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ channel ကိုအယုတ္တအနတ္တရှောင်နှင့်မျှမပြသသော "ဟုခါးပတ်ကိုအောက်တွင်ပြက်လုံး။ " - သည်၎င်း၏လူကြိုက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက် ဤသည်မှာကောင်းသောဖြစ်ပါတယ်တွင်, သငျသညျကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲစာရင်းသွင်းနိုင်တယ်။ အဘယျသို့လုနီးပါး6လူဦးရေသန်းအမှုကိုပြုထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ယင်း၏တည်ရှိမှု၏ရှစ်နှစ်စဉ်အတွင်း channel ကို 27 သန်း 660 တထောင်ရရှိခဲ့သည်။ ရူဘယ်။
အဆိုပါရုပ်သံလိုင်းအရေးပါသောအ letspley ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများပါရှိသည်
ဤချန်နယ်ပေါ်တွင်သင်ဘာသာရပ်အပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောမြင်ကွင်းများတွေ့နိုင်ပါသည် - Yuri ရေခဲသေတ္တာထဲကနေရုပ်ရှင်များ, ဘဝဗီဒီယိုများနှင့်ဘလော့ဂ်များ letspley ။ FROSTa တွင်အကြောင်းကို 7.5 သန်းကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ရုပ်သံလိုင်းမပါဘဲရေးသားသူပြီးသား 57 သန်း။ 792 တထောင်ရရှိထားပြီးပါပြီမဟုတ်။ ရူဘယ်။
SlivkiShow - ထိုစပ်စုများအတွက်ရုပ်သံလိုင်း
စီးရီးအပတ်စဉ် "ဒါဟာပျော်စရာရဲ့" မှဗီဒီယိုနေရာဖြစ်သောပညာရေးဆိုင်ရာရုပ်သံလိုင်း။ အဆိုပါ subscriber များအား SlivkiShow - စပ်စုအသုံးပြုသူသန်းပေါင်းများစွာ၏ 4,5 ။ ယင်း၏တည်ရှိမှုစဉ်အတွင်းရုပ်သံလိုင်းဖန်တီးသူ 13 mln ။ 701 ယျတျောသညျပမာဏဝင်ငွေများ။ ရူဘယ်။
Katya Clapham စိတ်ခွန်အားနိုးဗီဒီယိုများထည့်လေ့မရှိ
Katya Clapham ပထမဆုံးရုရှား yutuberov အကြားခဲ့ပါတယ်။ မိမိအရုပ်သံလိုင်းတွင်ကကြည့်ရှုသူအပြုံးစေသည်ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုနေရာအဖြစ်စိတ်ခွန်အားနိုးဗီဒီယိုများ Self-တိုးတက်မှုတောင်းဆို။ channel ကိုကေတီ၏အကောင့်တွင် - နီးပါး 6.5 သန်းစာရင်းသွင်းသူများနှင့် 11 သန်း 662 တထောင်ရူဘယ်, တစ်အွန်လိုင်းရောက်ရှိနေစဉ်အတွင်းရရှိခဲ့ ...
နေ့စွဲရန်, ရုပ်သံလိုင်း Oleg Bruijn ထံမှစုစုပေါင်းဝင်ငွေထက်ပို 32 သန်းရူဘယ်ဖြစ်ပါသည်
Letspley ရုပ်သံလိုင်း Oleg Bruijn ။ စာရေးသူကအသေးစိတ်တို့နှင့်ကြီးသောဟာသနှင့်အတူသူသည်ကျော်ကြားကွန်ပျူတာဂိမ်းယူဘယ်လိုအကြောင်းပြောပြသည်။ တူးမြောင်းထက်ပို7သန်းအသုံးပြုသူများကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ Bruijn 32 သန်း 820 တထောင်ရှိပါတယ်စုစုပေါင်းဝင်ငွေများ။ ရူဘယ်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သာ Maynkraft ရှိမရှိ, သငျသညျထက်ပိုမိုရရှိထားပြီးပါပြီရှိရာအမှု
ရောမ Phylchenkov ဟာအလွန်ကျဉ်းမြောင်းသောဘာသာရပ်အပေါ်တစ်ဦးချန်နယ်ကိုမဖန်တီး - သူဂိမ်း Minecraft ဖြတ်သန်း၏ပရိယာယ်စူးစမ်း။ အကြောင်း, သို့သော်ထက်ပိုမို5သန်း subscriber များအားတစ်လျောက်ပတ်သောစစ်တပ်စုဆောင်းဖို့သူ့ကိုမတားဆီးခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုလမ်းမတစ်လျှောက်တွင် - 25 သန်း 237 တထောင်ရူဘယ်ငွေ ..
ဒါဟာသူအမြတ်အစွန်းဆောင်ခဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်သင်အကြိုက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုဖန်ဆင်းတော်မူသောသူတို့ဘဝအတွက်တနေ့အလုပ်လုပ်မပြုခဲ့ကြောင်းယုံကြည်ရသည်။ ထိပ် 10 ရုရှား yutuberov များ၏သမိုင်း - သက်သေပြ။ YouTube ကိုသူတို့အဘို့ဖြစ်ပါသည် - ပဲအလုပ်တစ်ခုထက်ပို။ ဤသူကားအ - သငျကမ္ဘာတဝှမ်းတူသောစိတ်ကလူနှငျ့ဆကျသှယျနှင့်သူတို့၏အခွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့အကြိုက်ဆုံးဝါသနာ။ ထိုသို့ပြုမှသာဆက်လက်ဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်, သူတို့ဧကန်အမှန်သူတို့ကိုယ်သူတို့ဆပ်ဖို့ဆန္ဒရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်စိတ်ဝင်စားစရာအရာအားလုံးကိုပြောင်းပြန်အခါ: ကြော်ငြာရှင်များတန်းစီနေကြပြီး, ရရှိခဲ့ပြီးပမာဏငါတို့မျက်မှောက်၌ကြီးထွားလာကြသည်။